Maxaan xirtaa | Bezzia
Haweenka qaabka leh | | Quruxda, fashion
Markasta oo aan baxno waxaan isweydiineynaa isla su'aasha iyo marwalba oo aan dhameysano wax aan xirno, kadib markaan iskudayey dhamaan dharkaaga.
Muhiim maahan in la helo labis aad u ballaaran oo awood u leh in lagu daro qaab iyo xarrago gaar ah, laakiin caqli yar oo caadi ah oo la aqbalo inay jiraan dhar ama midabbo gaar ah oo naga habboon kuwa kale.
Haddii aad jeceshahay buluugyada ama shaatiyadaha leh ubax ama ujeeddooyinka cajiibka ah, waa inaad ku dartaa surwaal caadi ah ama goonno, midabbo u dhigma mid kasta oo ka mid ah shaarka ama shaati.
In kasta oo ay tahay sharci, waxa fiican in la iibsado wax yar iyo wanaag inta badan iyo wax xun. Dharka tayada liita waxay lumiyaan midabkooda dhowr maydhasho kadib, marka loo eego dharka tayada sare leh oo waqti dheer sii jira sida cusub.
Doorashada midabkeena nagu habboon waa fududahay, waa inaan dharka u soo dhaweynaa wejigeena oo aan aragnaa natiijada. Isku daristooda ma adka sidoo kale, tusaale ahaan, midabada waxay ka kala duwan yihiin "garish", ilaa midabada hore, ilaa madow iyo caddaan, classics par heer sare. Waa muhiim in aan waligaa la isku darin laba midab oo aad u xoog badan, haddii ay sidaas tahay waa inaad doorataa isku darka madow ama caddaan ama mid isku mid ah laakiin khafiifa.
ka dhammaystirnaanta Iyagu waa lagama maarmaan in la bixiyo hal sawir ama mid kale. Muhiim maahan inaan isku qurxinno waxyaalo dheeri ah, haddii kale waxaan u ekaan doonnaa geedka kirismaska. Haddii aan baxno habeenkii, silsilad yar ayaa ku filnaan doonta jijin. Haddii aan go'aansano inaan xirno siddooyin, mid ayaa ku filan. Hilqado waxay la jaan qaadi doonaan silsiladda ama shoogaha, haddii ay dheer yihiinna, qoorta qurxintu si fiican uma noqonayso mid la soo bandhigo
Kabaha ayaa ah kaabis aad muhiim ugu ah dharka wanaagsan. Hadda waxaan ka dooran karnaa noocyo badan oo kabo nooc ah, oo fidsan, ballaaran, cidhiidhi ah ama adag. Muhiimadu waa inaan si wanaagsan isugu dhafno nooca dharka aan xiraneyno.
Wax walba oo la arko ka dib, ma adkaan doonto in qiimeyn lagu sameeyo waxa ku jira qolkeenna iyo wax kasta oo u baahan in la cusbooneysiiyo ama la ilaaliyo. Si kastaba ha noqotee, iyadoon loo eegin talooyinka ay ku siin karaan adiga ama moodooyinka, waa annaga iyo qaabkeenna, iyo inaan daacad u ahaano waa inaan doorannaa dharkaas noogu habboon midabkooda, goynta ama dharka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Maxaan xirtaa
Naqshadeeyayaasha Boqortooyada iyo Boqoradaha Fashionka
12 fikradaha jacaylka ah ee loogu talagalay bisha malabka